May 2020 – Page 10 – SYL Entertainment
လေလည်တဲ့ အနံ့ကို နှင်းဆီရနံ့အဖြစ် ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတစ်မျိူး စတင်ဝယ်ယူနိုင်ပြီ
ယခု သတင်းသည် နေ့စဉ်သတင်းနှင့်သုတရသအဖြာဖြာ Page မှ ရေးသားထားသော သတင်း ဖြစ်သည်။ လေလည်တာဟာ လူအများစုအတွက်တော့ရယ်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သလိုအချို့လူတွေကတော့ ရွံ့စရာတစ်ခုအနေနဲ့ မြင်တတ်ကြပါတယ်။ လေလည်ခြင်းဟာတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးရင်းနှီးမှုတွေပျက်ဆီးသွားနိုင်သလို လူမှုအသိုင်းထဲမှာလဲ ရှုတ်ချခံရနိုင်တဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကိုဖော်ပြရရင်တော့ အဖေကလေလည်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှ မပြောနိုင်ဘဲ အောင့်သက်သက်နဲ့ သည်းခံရမှာပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း လေလည်တာကို ဟာသတစ်ခုလိုမမြင်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကကားထဲမှာလေလည်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ကားမှန်ကိုချက်ချင်းဖွင့်လိုက်မှာဖြစ်သလို ဒါကိုဟာသတစ်ခုအနေနဲ့လည်းမတွေးနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီအရာတွေအားလုံးကိုအဆုံးသတ်သွားစေနိုင်မယ့်အရာကို Lutin Malinလို့အမည်ရတဲ့ ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လေလည်ခြင်းတွေကနေ ထွက်လာတဲ့အနံကိုနှင်းဆီရနံကိုပြောင်းပေးမယ့် ဆေးတစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ […]
မေလ ၁၂ရက်နေ့ ဒီနေ့ည ၈ နာရီအချိန် ကိုဗစ် ၁၉ နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ထုတ်ပြန်ကြေငြာ
ယခု သတင်းကို ( MOHS ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၁၂-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ၁။ (၁၂-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေပိုင်းတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ ပထမအသုတ်စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၄) ခုနှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၀၃) […]
အများပြည်သူများဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဆုံး ဖြစ်နေကြရတဲ့ ဘုန်းဘုန်းကြီးအရှင်ဆေကိန္ဒရဲ့ လှူဒါန်းမှုနောက်တစ်ခု
ယခု သတင်းကို ( Okkar Thein ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် ဘုန်းဘုန်းကြီး အရှင်ဆေကိန္ဒ မှ မီဘေးသင့် အိမ်ထောင်စုများကို လှူဒါန်း ခဲ့တယ်လို့ သိရပါသည်…. စစ်ကိုင်းတိုင်း မြင်းမူမြို့နယ် စိုင်မြစ်ရွာ မီးဘေးသင့် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၅၂ စုကို တစ်အိမ်ထောင်စုလျှင် (၁)သိန်းစီအလှူနှင့် မီးဘေးသင့် ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့အား (၃)သိန်း စုစုပေါင်း (၅၅)သိန်း […]
ခင်ပွန်းဖြစ်သူအခန်းထဲမှာ အသက်ဆုံးရှုံးရမယ့် အန္တရာယ်မှကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော်ငယ်ငယ်
ယခု သတင်းကို ( Nge Nge Candice ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် ညနေ ၄နာရီ လောက်က ပါ။ မနက်ပိုင်းဆို ကိုယ်က ကလေးအခန်းထဲပဲ နေတာများပါတယ်။ ကိုဘိုကြီးက Master bedroom ထဲ အိပ်နေပါတယ် ။ ပုံမှန်ဆို မနက်စောစော အိပ်ပြီး နေ့လည်နိုးတယ် ။ ဒီနေ့အလုပ်များလို့ သူ […]
တရုတ်နိုင်ငံ ဝမ်တိန်မြို့ကနေ မြန်မာကို ပြန်လာသူ ၆ ဦး တိမ်းရှောင် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ရာမှ….
ယခု သတင်းကို ( MyatThu ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် တရုတ်နိုင်ငံ ဝမ်တိန်မြို့မှ အိမ်မဲမြို့သို့ပြန်လာမည့် နေရပ်ပြန် (၆)ဦးအား ရန်ကုန်ဘူတာကြီး၌ သွားရောက် ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရာတွင် ရထားဆိုက်ရောက်ချိန်မှာ ပါလာခြင်းမရှိပဲ တိမ်းရှောင်သွားရာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မယ်ဇလီစစ်ဆေးရေး ဂိတ်၌ သူတို့ (၆)ဦးအား ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်၊ မြို့နယ် ကိုဗစ်၁၉ ကော်မတီမှခေါ်ယူလာပြီး အိမ်မဲမြို့ အ.ထ.က(၁)ကျောင်း Facility […]
ဆေးရုံက မဆင်းခင် သူမရဲ့ သွေးရည်ကြည် ကို ပြန်ပြီးလှူဒါန်းခဲ့မယ် ဆိုတဲ့ ဆရာမကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်
ယခု သတင်းကို ( DUWUN ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် ပြည်ဆေးရုံကြီးက မေ့ဆေးဆရာဝန်မကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်က ရောဂါပိုး နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက် negative ပြခဲ့တာကြောင့် ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဒီကနေ့ည (၈)နာရီထုတ်ပြန်ချက်မှာ ရောဂါပျောက်ကင်းသူစာရင်းမှာ ဆရာမကြီးလည်းပါဝင်ခဲ့တာပါ။ ဆရာမကြီးက ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရပြီးနောက် Quarantine (၂)ပတ်ဆက်နေသွားရမှာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ သွေးရည်ကြည်နဲ့ COVID ပြင်းထန်လူနာတွေကို ပြန်လည်ကုသနိုင်အောင်လှူဒါန်းသွားမယ်လို့ […]
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရတဲ့ မေ့ဆေးဆရာဝန်မကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန် အတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်းထွက်ပေါ်
May 11, 2020 Writer SMT 0
ယခု သတင်းသည် နေ့စဉ်သတင်းနှင့်သုတရသအဖြာဖြာ Page မှ ရေးသားထားသော သတင်း ဖြစ်သည်။ ကိုဗစ် ကူးစက်ခံထားရတဲ့ မေ့ဆေးဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်မြင့်စိန် ဟာဆိုရင် ဆေးစစ်တဲ့ ရလာဒ်အရ (၂) ခါ Negativeရလာဒ်ကို ရထားကြောင်း ဝမ်းသာဖွယ်ရာ သိရပါတယ်။ ဆရာမကြီးဟာ ပေါက်ခေါင်းက ကိုဗစ်လူနာကို ကုသပေးရင်း အခုလို ကူးစက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ရဲရင့်တဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် အားလုံးက သူမကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်ဖို့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာကြောင့် အခုလို […]
ဒီနေ့ည ၈နာရီအချိန် ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးထုတ်ပြန်ကြေငြာ
ယခု သတင်းကို ( MOHS ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၁၁-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ၁။ (၁၁-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေပိုင်းတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၈၇) ခုနှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၆၆) ခု၊ စုစုပေါင်း […]
ယခု သတင်းသည် နေ့စဉ်သတင်းနှင့်သုတရသအဖြာဖြာ Page မှ ရေးသားထားသော သတင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဝါရင့် သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီလွင်မိုးကတော့ အနုပညာဘက်မှာထူးချွန်သည်သာမကပဲ စီးပွားရေးမှာလည်း ထူးချွန်သူဖြစ်ပါတယ်နော်။ သူဟာ အနုပညာလောကမှာ ရှိခဲ့စဉ်ကလည်း လျှမ်းလျှမ်းတောက် ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ ပရိတ်သတ်က ချစ်ခင်ကြသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူဟာဆိုရင် မင်းသားဆိုတဲ့ မာန မရှိပဲ သူတစ်ပါးကိုကူညီတတ်တာ ၊ ကျေးဇူးမမေ့တတ်တာတွေကလည်း ပိုမို အမှတ်ရစေတဲ့ အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်။ […]
ယခု သတင်းကို ( Zin Moe ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် ဦးဇော်မင်းဦး အသက်(၄၇) (ဘ)ဦးလှမြင့်(မိ)ဒေါ်ရင်နု ဘုရားကြီးကုန်းကျေးရွာ၊ ပုသိမ်အရှေ့မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်း။ ဖျာပုံမှာ အရက်သောက်ရာမှ (၃)ရက်ခန့် အိပ်ပျော်သွားပြီ ပြန်နိုးလာတော့ ကျိုက်ခမီမှ ဘုံကျောင်း(ငါးဖမ်းလှေ)ပေါ် ရောက်နေကြောင်းသိရပါတယ် လာရောက်ပို့ဆောင်သူ ပွဲစားမခိုင်မှ ငွေ (၇)သိန်း ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီး လှေပေါ်တွင် (၆)လ(၁၅)ရက် အလုပ်လုပ်ခဲ့ရပါသည်။ […]